गंगा खडकाको लघुकथा "दूरी" - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ४ बैशाख २०७८, शनिबार २२:०८ मा प्रकाशित
म गाउँदेखि हतारिएर मेरी बाल्यकालकी साथी कमलालाई हेर्न काठमाडौँ आएँ । उनी स्तन क्यान्सरले गर्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेकी थिइन् । उनले मलाई असाध्यै सोधेकी थिइन् रे । मैले त उनको घर देखेकी थिइन् । मेरो भाइले देखेको छु, लगिदिन्छु भन्यो ।
म कहिल्यै काठमाडौँ नआएको मान्छे, मलाई त्यति मेलोमेसो थिएन । शनिबार भाइको पनि छुट्टी भएकाले दिदीभाइ कमलालाई भेट्न बानेश्वरतिर लाग्यौँ । भाइले पनि धेरै अगाडि घर देखेकाले कुन चाहिँ घर हो भनेर अलमलियो ।
“म आउँदा त यतिका घर नै थिएनन्, खै कुन हो कुन ?” उसले यही घर हो कि भनेर मोटरसाइकल रोक्यो । मैले घरको गेटबाट चियाएँ ।
“कसलाई खोज्नुभएको हो ?”
मैले उनको प्रश्नको उत्तर नदिइकन प्रतिप्रश्न गरेँ, “तपाईँ यो घरको घरबेटी हो ?”
“हो, मैले तपाइँलाई चिनिन नि ।” उनले भने ।
मैले भनेँ “म कमलालाई भेट्न आएकी । उनी निकै बिरामी छिन् रे ।”
“यहाँ त कोही कमला नाम गरेको मान्छे छैन । बिरामी पनि कोही छैन ।” उनले गेट लगाउन खोजे ।
“मैले पनि धेरै अगाडि देखेको हो । घर बिर्सेँ । यतै हुनुपर्छ । हजुरले यतातिर कोही कमला नाम गरेको मान्छेलाई चिन्नुभएको छैन ?” भाइले रोक्दै सोध्यो।
“कमला त कति हुन्छन् कति । छैन मैले चिनेको ।” उनले झर्कँदै गेट बन्द गरे ।
हामी अलमलमा पर्यौं । नजिकैको घरको कौसीबाट एकजना महिलाले भनिन् “कमलाको घर त यो हो तर उहाँलाई हिजै लगेर हस्पिटल भर्ना गरिएको छ । आइ सि यु मा हुनुहुन्छ रे । घरमा कोही छैन, म चाहिँ यहाँ कोठामा बस्छु ।”
“उफ ! सहरमा घरहरूको दूरी यति नजिकै भएर पनि सम्बन्धको दूरी कति टाढा । महिनौँदेखि छिमेकी बिरामी भएको कुरा नि थाहा छैन भने मर्दाको मलामी जिउँदाका जन्ती कसरी बन्लान् ?” म सोच्दै गएँ ।
प्रा.डा. विष्णु राईको कविता जागीर